Kabtan Vidic Oo U Saftay Kooxdiisa Kadib Siddeed Bilood Oo Uu Garoomada Dhaawac Ugaga Maqnaa - jornalizem
Kabtan Vidic Oo U Saftay Kooxdiisa Kadib Siddeed Bilood Oo Uu Garoomada Dhaawac Ugaga Maqnaa
Kabtanka kooxda Man United Nemanja Vidic ayaa garoomada ku soo laabtay kadib markii uu dhaawac ugaga maqnaa illaa iyo bishii December ee sanadkii hore waxana kooxda Man United ay barbaro isla dhaafi waayeen kooxda Valerenga ciyaar ka dhacday Oslo.
Wayne Rooney ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa Man United isagoo saftay kulankii ugu horeeyey ciyaaraha diyaargarowga xilli ciyaareedka.
Hase ahaatee United ayaa ku guuldareysatay inay shabaqa kubbada taabsiiso kulankii saaxibtinimo ee ay wada ciyaareen kooxda ka dhisan Norway ee Valarenga iyadoo tababaraha United Sir Alex Ferguson uu ugaga soo haray magaalada Manchester si uu u xoojiyo doonitaanka kooxda ee kabtanka kooxda Arsenal van Persie.
Rooney ayaa gool la fishay qasaariyay kadib markii uu madaxa kubbada la helay balse ay dhinac martay birta kubad uu u soo karoosay Ashley Young, hase ahaatee waxaa uu ka badbaadiyey Rooney kooxdisa gool uu madaxa ku dhalin gaaray Chuma Anene.
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale naadiga Man United u soo laabtay Danny Welbeck oo fasax la siiyey tartankii Euro 2012 kadib ku maqnaa hase yeeshee fursado badan oo uu helay ayuu dhalin waayey Welbeck.
Antonio Valencia ayaa difaac ka ciyaarayay kulankan iyadoo Nani uu ka horeeyey, Shinji Kagawa, Javier Hernandez,Nick Powell iyo Anderson ayaa kursiga keydka ka soo kacay markii dambe oo ciyaarta saftay.
Kulankan ayaa ku dhamaaday barbaro aan wax goolal ah la iska dhalin hase yeeshee United ayaa arbacada magaalada Gothernburg waxa ay kula ciyaari doontaa kooxda Barcelona.